Mpempe akwụkwọ Frosted / Matte Acrylic, China Frosted / Matt acrylic Sheet Ndị na-emepụta ihe, Ndị na-ebubata, Ụlọ ọrụ - Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd.
>lọ>Product>Frosted / Matte Acryli mpempe akwụkwọ
Mpempe akwụkwọ acrylic Frosted Cast nwere matte emecha n'otu akụkụ ma ọ bụ n'akụkụ abụọ ma ọ dị n'ụdị agba mara mma nke dabara na ihe niile achọrọ.
Mpempe akwụkwọ acrylic oyi kpọnwụrụ dị na ọkpụrụkpụ site na 2mm ruo 30 mm, na nha akwụkwọ ọkọlọtọ bụ 1220 × 2440mm na 2050 × 3050mm maka nhọrọ gị.
Ngwucha oyi anyị nwere doro anya, ma site na anya ma site na aka.
Ọkwa ọkọlọtọ 1220*1830, 1220*2440,1270*2490, 1610*2550,1440*2940, 1850*2450, 1050*2050,1350*2000,2050*3050,1220*3050 mm
◇ Mfe nke nrụpụta: Enwere ike ịchacha mpempe akwụkwọ acrylic, kpuchie mkpuchi silk, kpuchie ihe mkpuchi, ma nwee ike ịcha ya, gwuo ya, ma rụọ ya ka ọ bụrụ ụdị ọ bụla mgbe ewe iwe dị ọkụ.
◇ Ịdị arọ: ihe na -erughị ọkara ka iko;
◇ Magburu onwe ihu igwe na -eguzogide megide discoloration na deformation;
◇ Nguzogide mmetụta pụrụ iche: ugboro 7-16 karịa mmetụta mmetụta karịa iko;
◇ Magburu onwe chemical na n'ibu eguzogide: iguzogide acid na alkali;
Mpekere acrylic nke nwere ọkwa dị elu nke emere naanị 100% akụrụngwa na-amaghị nwoke.
A na-ekpuchi mpempe akwụkwọ acrylic niile, akwụkwọ nkwa anaghị agbanwe mgbe ị na-eji mpụga, nwere ike iji n'èzí ruo afọ 8-10.
Enweghị isi mgbe ị na -egbutu ha site na laser ma ọ bụ igwe CNC, na -adị mfe ma na -akpụ akpụ.
Nchedoe akwụkwọ bụ mbubata, sie ike ma dị mfe iwepu, enweghị gluu hapụrụ.
Nke kacha mma ọkpụrụkpụ ndidi na zuru oke.
N'oge okpomọkụ (40 ℃), Ọ ga-agbatị ruo 1002 N'oge oyi (-30 ℃), Ọ ga-ebelata ka 997mm.
Mpempe akwụkwọ acrylic anyị kachasị mma nwere nkọwa doro anya, ihu igwe na ike dị elu. Enwere ike ịme ha thermoformed, ịkpụ, gbapuo, gbadaa, igwe, kanye, na-egbuke egbuke na glued. Enwere ike itinye ha na ntinye aka na mgbasa ozi / ọgwụ / ihe mgbochi acrylic / ngwa / ihe ọcha / ihe owuwu / ime ụlọ na arịa ụlọ / ụgbọ ala / ntụrụndụ / ụlọ ọrụ ụlọ. / acrylic ọla na ihe ndị ọzọ.
A: Anyị bụ ndị nrụpụta ọkachamara nwere ahụmịhe afọ 20 na ngalaba a.